महानायक राजेश हमालको पहिलो प्रेमः टेस्ट पास गर्दा डिग्री पढ्ने केटीसँग « Rara Pati
२९ भदौं, काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालले १७ वर्षको उमेरमा डिग्री पढ्ने केटीसँग पहिलो पटक प्रेममा पेरेका खुलासा गरेका छन् । महानायक हमालले आफू टेस्ट पास गरी ११ मा पढ्दै गर्दा भारतको चण्डिगढमा साइकोलोजीमा मास्टर्स डिग्रीमा पढ्ने केटीसँग पहिलो प्रेम भएको बताएका हुन् । उनले आफूलाई त्यस खालको प्रेम महशुस उनीसँग छुट्टिए पछि कहिल्यै पनि नभएको समेत बताए ।
महानायक हमालले भिएफवाई टक्समा भूषितासँग भने, ‘अहिले फर्केर हेर्दा ऊसँग मैले जुन खालका क्रियाकलापहरू गरिरहेको थिए, उसलाई नभेट्दा खेरी मिस गर्ने, लामो समय विदामा गएर फर्किदा खेरी भोलीपल्ट ऊसँग भेट हुन्छ भन्दाखेरीको खुलदुली हुने …..त्यस खालको महशुस पछि मैले कहिल्यै गरिन । मेरो अरू थुप्रै केटी साथीहरू पनि मन पथ्र्यो, आकर्षण हुन्थ्यो तर त्यो किसिमको महशुस कहिल्यै भएन ।’
भुषिताले तपाईँहरूबीच कस्तो खालको कुराकानी हुन्थ्यो भनी सोधेको प्रश्नमा महानायक हमालले भने, ‘दुई जना व्यक्तिको अत्यन्तै राम्रो आकर्षण भयो वा ह्याविचुअय भने भने के हुँदो रहेछ भने कस्तो खालको कुराकानी भइरहेका छ, एकअर्कालाई के भनिरहेका छ ? त्यसको मतलव नै नहुने रहेछ । यस्तै एकअर्कालाई निस्फिक्रि बोलिरहेका हुन्थ्यौं । दिनभरी सँगै बसेर गइसकेपछि साँझ गएर फोनमा पनि ४–५ घण्टा कुरा गथ्यौं । म अहिले सोच्छु कि के कुरा गर्या हुँला ।’
हमालले नोस्टाल्जिक हुँदै भने, ‘म चण्डिगढ होस्टेलमा बसिरहेको हुन्थे । त्यसबेला मोवाइल पनि थिएन, आफूले डायल गर्न नमिल्ने रिसिभ मात्र गर्न मिल्ने फोन अफिसमा थियो । जुन झ्यानिर झुण्ड्याइएको थियो । दिउँसो भेटर ऊ घर जान्थ्यो, ऊ चण्डिगढको स्थानीय थियो । उसले ७ बजे घर गएर फोन गर्छु भनेपछि म झ्यालनिर ७ बजे गएर बसिराखेको हुन्थे । घण्टी बज्ने वित्तिकै यो मेरो फोन हो भनेर उठायो, कहिले काहिँ अर्कैको पथ्र्यौ । झ्यालमा अढेस लागेर घण्टौं के कुरा गरे हुँला !’
यो सम्बन्ध कसरी सकियो भन्ने प्रश्नमा महानायक हमालले भने, ‘उमेर ! हाम्रो उमेर फरक थियो । म १७ वर्षको ऊ २२ वर्षको थियो । ऊ मास्टर्स पहिलो वर्षमा पढ्दा हामी प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो । मास्टर्स सकिने बेलामा उसलाई घरबाट विवाह गर्नमा आतुरी गरे । एउटा कुरा चाहिँ म के प्रष्ट थिए भने यो मेरो विवाह गर्ने उमेर चाहिँ होइन ।’
महानायक हमालले केटीहरूसँगको सम्बन्धका विषयमा भने, ‘म २० वर्षको वरिपरि हुँदा प्रायः ४–५ वर्ष मभन्दा बयस्क केटीहरूसँग डेटिङ गरे । म २५ वर्षको हुँदा केटी साथीहरू ३० वर्षमाथि हुने हुन्थ्यो । संयोगले म ४० वर्ष पुगेपछि चाहिँ उल्टो भयो ।’
केटीहरूसँगको सम्बन्धका विषयमा उनले थप भने, ‘एकअर्कालाई बुझ्न चाहने आफूभन्दा भिन्दै कुराहरू आउने, आफूभन्दा भिन्दै अनुभवहरू आउने, त्यो भिन्नतामा पनि कमन ग्राउण्ड पाउने खालका केटी साथीहरूसँग सम्बन्ध भयो । यो मेरा लागि धेरै ठुलो सिकाई थियो । त्यसैले पनि भन्छु कि भाग्यवस जतिपनि देश विदेशका महिलाहरूसँग संगत गरे उहाँहरूले मेरो जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका किन खेल्नु भयो भने हाम्रो अन्तरक्रियाको स्तर त्यो अवस्थामा भयो ।’